ကိုယ်မဟုတ်တဲ့တစ်ခြားတစ်ယောက်ကြောင့် ပျော်နေရတယ်ဆိုရင်တော့စွန့်လွှတ်ပေးဖို့အသင့်ပဲလား…. – Trend.com.mm
ကိုယ်မဟုတ်တဲ့တစ်ခြားတစ်ယောက်ကြောင့် ပျော်နေရတယ်ဆိုရင်တော့စွန့်လွှတ်ပေးဖို့အသင့်ပဲလား….
Posted on March 10, 2019 March 9, 2019 by Shun Lei Phyo
ဖူးစာမပါလို့ ကွဲကွာသွားရင်တောင် ရင်ထဲနင့်သည်းပြီးချစ်ခဲ့ရသူတစ်ယောက်တို့ မင်းတို့မှာရှိကြမှာပါ။ အချစ်ရေးကြီးက ဆန်းတော့ဆန်းသားဗျ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်ချိန်က ဘယ်ေ လာက်ချစ်ချစ် တစ်ယောက်အတွက်အလိုအပ်ဆုံးကတစ်ယောက်ဘယ် လောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ တစ်ချိန်ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်က ကိုယ့်ထက်သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု တွေကိုယူဆောင်ပေးနိုင်တာ မျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဓိကက တော့ ကာယံကံရှင်ပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်က သူ့ အတွက်အလိုအပ်ဆုံးက တစ်ပါးသူပါလို့ ပြောလာတဲ့အခါ၊ အချက်ပြလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ…
ဒီလိုအ ခြေ နေမျိုး ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကို ကြုံဖူးတဲ့သူ တွေကသာနားလည်ခံစားနိုင်တာမျိုးပါ။ သိပ်ရင်နာရပြီး သိပ်ကြေကွဲရလည်း ကိုယ့်ချစ်ရသူ အဆင်ပြေဖို့ ကိုယ်က ရှောင်ထွက်ပေးလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်၊ ကိုယ်မြတ်နိုးရဆုံးသူ ပိုပြီးပျော်ရွှင်သာယာရဖို့ အချိန် ကြာကြာသူ့နားနေခဲ့ရတဲ့ကိုယ်က ဘေးကပ် ပေးလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးဟာ ခံပြင်းစရာ ကောင်းတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။
ဒါဆိုရင်မစွန့် လွှတ်ပဲ တွယ်ကပ်နေပြန်ရင်ကော …ဒီလိုကျပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တဲ့သူနားနေပြီးစိတ်ဆင်းရဲဝမ်းနည်းကြေ ကွဲနေရုံကအပ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပဲ။ မချစ်ဘူးဆိုတဲ့သူက ချစ်ကို မချစ်ဘူး။ မချစ်တဲ့ကိစ္စမှာ အ ကြောင်းပြချက် တွေကများတယ်။ အလုပ်မအားတာပါ၊ မင်း ကောင်းဖို့ လမ်းခွဲပေးတာပါ။ မင်းကငါနဲ့မတန်လို့ပါ။ စသဖြင့်ပေါ့ ။မချစ်တဲ့ကိစ္စကို ဘယ်လိုမှလုပ်ယူပြီးချစ်ကြည့်လို့မရသလိုဘယ်လိုမှလည်းချစ်ဖို့လုပ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်တွေ့သာကြုံလာခဲ့ရင် စွန့် လွှတ်မလား၊ ရသ လောက် ဆွဲထားကြည့်အူးမလား။ ဘာလုပ်လုပ်ကြေကွဲရမယ်ဆိုပင်မဲ့ ကိုယ်သာဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ညစ် နေမဲ့ RS Life ကိုတည်ဆောက်မဲ့အတူတူ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ကြေကွဲနေရတာမျိုးက တော်ပါသေးတယ်…
ဖူးစာမပါလို့ ကှဲကှာသှားရငျတောငျ ရငျထဲနငျ့သညျးပွီးခဈြခဲ့ရသူတဈယောကျတို့ မငျးတို့မှာရှိကွမှာပါ။ အခဈြရေးကွီးက ဆနျးတော့ဆနျးသားဗြ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျတဈခြိနျက ဘယျေ လာကျခဈြခဈြ တဈယောကျအတှကျအလိုအပျဆုံးကတဈယောကျဘယျ လောကျပဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ တဈခြိနျကိုယျမဟုတျတဲ့ တဈခွားတဈယောကျက ကိုယျ့ထကျသူ့ရဲ့ပြျောရှငျမှု တှေကိုယူဆောငျပေးနိုငျတာ မြိုးတှေဖွဈလာတတျပါတယျ။
အဓိကက တော့ ကာယံကံရှငျပါပဲ။ သူကိုယျတိုငျက သူ့ အတှကျအလိုအပျဆုံးက တဈပါးသူပါလို့ ပွောလာတဲ့အခါ၊ အခကျြပွလာတဲ့အခါ ဘယျလိုဆကျလုပျကွမလဲ…
ဒီလိုအ ခွေ နမြေိုး ဒီလိုခံစားခကျြမြိုးကို ကွုံဖူးတဲ့သူ တှေကသာနားလညျခံစားနိုငျတာမြိုးပါ။ သိပျရငျနာရပွီး သိပျကွကှေဲရလညျး ကိုယျ့ခဈြရသူ အဆငျပွဖေို့ ကိုယျက ရှောငျထှကျပေးလိုကျရတဲ့အခိုကျအတနျ့၊ ကိုယျမွတျနိုးရဆုံးသူ ပိုပွီးပြျောရှငျသာယာရဖို့ အခြိနျ ကွာကွာသူ့နားနခေဲ့ရတဲ့ကိုယျက ဘေးကပျ ပေးလိုကျရတဲ့အခိုကျအတနျ့မြိုးဟာ ခံပွငျးစရာ ကောငျးတဲ့ဝမျးနညျးမှုကွီးတဈခုပါပဲ။
ဒါဆိုရငျမစှနျ့ လှတျပဲ တှယျကပျနပွေနျရငျကော …ဒီလိုကပြွနျရငျလညျး ကိုယျ့ကိုမလိုအပျတဲ့သူနားနပွေီးစိတျဆငျးရဲဝမျးနညျးကွေ ကှဲနရေုံကအပ ဘာမှမလုပျနိုငျဘူးပဲ။ မခဈြဘူးဆိုတဲ့သူက ခဈြကို မခဈြဘူး။ မခဈြတဲ့ကိစ်စမှာ အ ကွောငျးပွခကျြ တှေကမြားတယျ။ အလုပျမအားတာပါ၊ မငျး ကောငျးဖို့ လမျးခှဲပေးတာပါ။ မငျးကငါနဲ့မတနျလို့ပါ။ စသဖွငျ့ပေါ့ ။မခဈြတဲ့ကိစ်စကို ဘယျလိုမှလုပျယူပွီးခဈြကွညျ့လို့မရသလိုဘယျလိုမှလညျးခဈြဖို့လုပျယူလို့မရနိုငျပါဘူး။
ကိုယျတှေ့သာကွုံလာခဲ့ရငျ စှနျ့ လှတျမလား၊ ရသ လောကျ ဆှဲထားကွညျ့အူးမလား။ ဘာလုပျလုပျကွကှေဲရမယျဆိုပငျမဲ့ ကိုယျသာဆိုရငျတော့နှဈယောကျလုံးစိတျညဈ နမေဲ့ RS Life ကိုတညျဆောကျမဲ့အတူတူ ကိုယျတဈယောကျတညျးကွိတျကွကှေဲနရေတာမြိုးက တျောပါသေးတယျ…